डाक्टरको चे तावनी : अब कोरोनाले भीआईपीलाई ढा’ल्छ आश्चर्य नमान्नुहोला ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/डाक्टरको चे तावनी : अब कोरोनाले भीआईपीलाई ढा’ल्छ आश्चर्य नमान्नुहोला !
डाक्टरको चे तावनी : अब कोरोनाले भीआईपीलाई ढा’ल्छ आश्चर्य नमान्नुहोला !
काठमाडौ । अहिलेकै अवस्थालाई नियाल्ने हो भने पनि देशभरमा लक्षण भएका र नभएका संक्रमित संख्या करिव दुई लाखजति छन् । यो दुई लाख संक्रमित संख्यालाई पहिचान गर्न करिब २० लाख पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यी के’सहरुलाई यत्तिकै छोडिदियो भने वृद्ध, बालबालिकामा फैलन्छ र नेपाल पनि अमेरिका र इटलीकै अवस्थामा पुग्छ ।
यसलाई अहिले नै रोक्ने हो । दशैं–तिहारसम्म पूर्ण रुपमा कफ्र्यु नै लगाएर स्थितिलाई निय’न्त्रणमा लिनुपर्छ । जति पनि नागरिकहरु खानै नपुग्ने अवस्थामा छन्, उनीहरुलाई राज्यले राहत उपलब्ध गराउनुपर्छ । न्यून आयस्रोत र दैनिक श्रम गर्ने व्यक्तिहरुको स्थानीय निकायबाटै पहिचान गरेर स्थानीय निकायबाटै व्यवस्थितरुपमा राहत बाँड्न सक्छ । यो नै नेपालमा कोरोना निय/न्त्रण’का लागि प्रभावकारी उपाय हो । यदि सरकारले यसो नगर्ने हो भने लकडाउन मात्र गरेर हुँदैन, कोरोना जस्तो महा’मा’री रोग नियन्त्र’ण गर्न अ सम्भव हुन्छ ।
चौथो, भारतको बोर्डरदेखि नेपालको एयरपोर्ट तत्काल खोल्नुहुँदैन, पूर्णरुपमा कम्तिमा तीनदेखि चार महिनाका लागि बन्द गर्नुपर्छ र उपत्यकामा प्रवेश हुने साँगा, थानकोट, फर्पिङ नाका दशैं–तिहारसम्म पूर्ण रुपमा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा प्रवेश पूरै ब न्द गर्नुपर्छ । काठमाडौं भित्रकालाई काठमाडौं भित्र मात्र, चितवनमै परिचालन गर्ने काम कडाइका साथ गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सेना, प्रहरी परिचालन गर्नुपर्छ । जति पनि संक्रमितको सम्पर्कमा आएका छन् तिनलाई कडा निगरानी हुनुपर्छ । अहिलेको निगरानी भनेको अत्यन्तै फितलो छ यस्तो निगरानीले कामै गर्दैन ।
अब संक्रमितको सं’क्रम’णमा आएका जति पनि छन् कन्ट्रयाक टे सिङ गर्नुपर्छ । यो कामका लागि सेना र प्रहरी नै परिचालन गर्नुपर्छ । लक्षणविनाका संक्रमितबाट अरुमा सर्ने दर सबैभन्दा बढी छ । सरकारले आइसोलेसन थपेन र परीक्षण बढाएर ग’म्भी रता अपनाएन भने यो संख्या एकदेखि डेढ महिनाभित्र ह्वा त्तै बढ्छ । त्यसको लागि सरकारले औषधि ल्याउन ढिला गर्नुहुँदैन । यसका लागि सरकारले अनिवार्य रुपमा एग्रे’सि’भ प्लान तयार गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
अहिले जुन किसिमको ला प रबाही भएको छ यो नरोकिने हो भने मृ/त्युदर छिटोछिटो बढ्छ र घरघरमा, अस्पतालमा ठूलो संख्यामा मृ/त्युदर बढ्ने दिन आउँदै छ । संक्रमण अहिलेसम्म समुदायमा फैलिकेको छ । नेपाल समाचारपत्रका लागि भगवती तिमल्सिनाले डा। रमेश आचार्यसंग गरेको कुराकानी हामीले साभार गरेको ।From nipolnews